पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र १९ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल – Classic Khabar
September 4, 2021 71
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल भाद्र १९ गते शनिबार इश्वी सन २०२१ सेप्टेम्बर ४ तारीख भाद्र कृष्ण्पक्ष द्वादशी तिथी पश्चात त्रयोदशी तिथी तिष्य नक्षत्र वरियान योग तैतिल करण चन्द्रमां कर्कट राशिमा आनन्दादि योगमा मित्र योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु शनिप्रदोषव्रत ( ज्यो.प.सरोज घिमिरे
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगन सिलताको कदर हुनेछ । भुमि तथा वाहान शुख प्राप्त रहनेछ । पूराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । महत्वपूर्णकार्य सम्पादन गर्न पारीवारिक साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) तपाईको कार्य सम्पादनको श्रेय अन्य ब्यत्तिहरुलाई सहजै प्राप्त हुनेछ । प्रतिपक्षीहरु कमजोर रहनाले कार्य सहज बन्नेछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेता पनि यात्रा झन्झट पुर्ण रहन सक्नेछ । काम गर्दा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला सामान्य अप्जस आईपर्न सक्नेछ ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) सामान्य चोट पटक आईपर्नेछ । खराब संगतका कारण सामान्य समस्या आइपर्न सक्नेछ । समयको सहि सदुपयोग गर्न नसक्नाले कार्य क्षेत्रमा साधारण ढिलाई भोग्नु पर्नेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । आफन्तजन हरुको साथ सहयोगको कमि महसुस हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ ।
Prev२८ यात्रु सवार बस दुर्घटनाग्रस्त, १५ जना घाइते, कसरी भयो दुर्घटना ?
Nextको हुन् सबैभन्दा अन्तिममा अफगानिस्तान छोड्ने अमेरिकी सैनिक ?
श्रीमानले अर्कै बिहे गरेपछि घर छाडेकी उमा दिदीको रुवाबासी,गर्छिन यस्तो काम,जितिन संसारको मन
आमासँग फोनमा बोल्दाबोल्दै दुर्घटनामा परेर मञ्जुले प्राण त्यागिन्, दुई दिनअघि बनाएको त्यो टिकटक भिडियो]\_